ထိရောက်သော CV (The Successful CV) - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on September 26, 2013 at 16:52 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
CV တစ်ခုကို ပြင်ဆင်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ နယ်ပယ်လေးခုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ နည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ရရှိလာမဲ့ ရလာဒ်ကတော့ တစ်ခုတည်းသော ဖြစ်နိုင်ချေပါ။ ဘယ်ချဉ်းကပ်နည်းကိုပဲသုံးသုံး သင့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကို မှတ်စုအဖြစ်ပြောင်းရေးတဲ့အခါမှာ အသေးစိတ်ဖို့ မမေ့ပါနှင့်။ သင့်အနေနဲ့ အလုပ်နဲ့မဆီလျော်ဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့ အချက်တွေကိုတောင်မှ ထည့်ရေးဖြစ်အောင်ရေးပါ။
ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့ စာရင်းတွေ၊ မှတ်စုတွေကို ကိုယ့်အနီးအနားမှာ မြင်သာအောင် ဖွင့်ထားပါ။ ၄င်းတို့ကို မကြာခဏ ပြန်ပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့ ဘယ်အချက်မှ မေ့မကျန်ခဲ့ဘူးဆို တာကို သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဒီလိုပြင်ဆင်မှုအဆင့်က ဦးနှောက်ကို သေသေချာချာ စဉ်းစားအောင် လုပ်ခိုင်းခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ စီစဉ်ခြင်းတို့က နောက်ကလိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာရှင်အများစုက သူတို့ရဲ့ CV တွေကို အတွေ့အကြုံနဲ့ စရတာလွယ်တယ်လို့ ယူဆထား ကြပါတယ်။ ဘာ့ကြောင်လဲဆိုတော့ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဘ၀ကို အဆင့်ဆင့် ပိုင်းခြားပြီး စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီအဆင့်တွေဟာ ဘာတွေလဲဆိုတာကတော့ သင့်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါ တယ်။ အဆင့်တွေရဲ့ ပိုင်းခြားမှုတွေကို အလုပ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ သင့်ဘ၀ရဲ့ အဓိကကျတဲ့ အဖြစ်အပျက်များ (ဥပမာ-အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊ သားသမီးရရှိခြင်း၊ အိမ်ဝယ်ခြင်း)နဲ့ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံမှတ်စုတွေမှာပါဝင်သင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော-့
ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းများ (professional training)
အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကာလများ (periods of employment) (ဒီထဲမှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေ၊ ကြာကြာမခံခဲ့တဲ့အလုပ်တွေ၊ မည်မည်ရရအလုပ်တွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။)
လုပ်ဆောင်ချက်တစ်မျိုးတည်းအပေါ် အာရုံစိုက်ခဲ့ရတဲ့ သင့်ဘ၀မှာ အကျုံးဝင်ခဲ့တဲ့ တခြားအချိန် ကာလများ (other extended periods in which your life focused onaparticular activity)
လုပ်ခဲ့ဖူးသော လုပ်အားပေးအလုပ်များ (any volunteer work you have done) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်လျှောက်လွှာပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာ ဘာ့ကြောင့် ကိုယ်ပိုင်ဝါသနာတွေကို ထည့်စဉ်းစားရပါ လိမ့်-ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို သင့်အနေနဲ့ မေးကောင်းမေးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ၀ါသနာဆိုတာ သင်အလုပ် အားတဲ့အချိန်တွေမှာ လုပ်တဲ့အရာတွေပဲ မဟုတ်ပါလား? ၀ါသနာတွေကို အောက်ဖေါ်ပြပါအကြောင်းများကြောင့် အလုပ်လျှောက်လွှာ ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၀ါသနာတွေဟာ_
သင့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကို ပုံဖော်ပြတဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ဒါ့အပြင် သင့်ပင်ကိုယ် စရိုက်ဆိုတာကလည်း အလုပ်လျှောက်လွှာအတွက် အလွန်ဆီလျော်လှပါတယ်။
လတ်တလော လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးမပြုရတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလည်း ဖော်ပြနေပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ရာသောအလုပ်မျိုးကိုမှ သင်ဟာ ဘာ့ကြောင့် စိတ်ဝင်စားနေရတာလဲဆိုတဲ့အချက်ကို လည်း ဆက်စပ်ပြနေပါတယ်။
အရင်က သင် မစဉ်းစားခဲ့ဖူးသော အလုပ်တွေကိုလည်း ညွှန်ပြနေတတ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို စီတန်းရေးချတဲ့အခါမှာ အရင်အတွေ့အကြုံတွေကို စဉ်းစားပြီး ထုတ် ထားတဲ့ မှတ်စုလေးတွေက အထောက်အကူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းများကို စဉ်းစားရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အောက်ပါ မေးခွန်းများကို မေးကြည့်ပါ။
ငါ့မှာ ရှိပြီးသား ကျွမ်းကျင်မှုတွေထဲက ဘယ်တစ်ခုကို ဒီနေရာမှာ အသုံးပြုခဲ့တာလဲ?။
ဘယ်ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို တိုးတက်အောင် (သို့) ခိုင်မာအောင် ပြုလုပ်ခဲ့သလဲ?။
ဘယ်ကျွမ်းကျင်မှု အသစ်တွေကို သင်ယူခဲ့သလဲ?။
ထို့အပြင် သင့်ရဲ့ အားလပ်ချိန်မှာ လုပ်တဲ့ ၀ါသနာတွေကိုလည်း စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဒါတွေကလည်း အလုပ်လျှောက်ခြင်းနဲ့ ဆီလျော်ပြီး အသုံးဝင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုစာရင်းထဲမှာ အသက်မွေးမှုပညာ၊ အလုပ်အကိုင်တွေနဲ့ပဲ ဆက်စပ်နေတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု များသာမက မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုပါ ထည့်ရေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ပွဲများစီစဉ်ခြင်း (organizing events)
၀န်ထမ်းများကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်း (training staff)
အကြံဥာဏ်များပေးခြင်း (giving advice)
အစည်းအဝေးများ၌ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း (chairing meetings)
တင်ဆက်မှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်း (making presentations)
ပြဿနာများဖြေရှင်းပေးခြင်း (trouble - shooting)
လူစုလူဝေးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း (meeting the public)
ဒီလို စာရင်းပြုစုနေတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရေးချလိုက်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာ ဆီလျော်မှုရှိရဲ့လားဆိုတာ ကို တွေးပြီး သိပ်စိတ်ပူမနေပါနဲ့။ ရှိသမျှ အကုန်သာချရေးပါ။
ရေးလို့ပြီးပြီဆိုတော့မှ စာရင်းကို ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာ သီးခြား ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီလား (သို့)သီးခြားခွဲထုတ်ပစ်သင့်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုအစုလားဆိုတာကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ မယ်။ ဥပမာ- အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော သီးခြားကျွမ်းကျင်မှု (၃)ခုအဖြစ် ရေးခဲ့ရမှာကို communicating (ဆက်သွယ်ရေးကောင်းခြင်း)လို့ပဲရေးခဲ့တာမျိုးပဲပေါ့၊။
နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ခြင်း (simplifying technical subject matters)
ရှင်းလင်းလွယ်ကူသော နည်းပညာဆိုင်ရာလက်ဆွဲစာဆောင်များရေးသားခြင်း (writing simple technical manuals)
ကျွမ်းကျင်မှု မရှိသေးသော ၀န်ထမ်းများကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်း(training non–specialist workers)
ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းများ (Personal Qualities)
ဒီနယ်ပယ်ကိုတော့ လူများကအခက်ခဲဆုံးဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့၊ ကိုယ်ရဲ့အရည်အချင်းတွေအကြောင်းကို မပြောချင်ကြလို့ပါပဲ။။ အကြောင်းကတော့ မိမိကို ဘ၀င်မြင့်သူ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှေ့တန်းတင်သူအဖြစ် အထင်ခံရမှာ စိုးလို့ပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ခြေတစ်လှမ်း နောက်ဆုတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ ကြည့်ရမှာ ခက်ခဲနေလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တဖက်ကကြည့်တော့လည်း အလားအလာရှိသော အလုပ်ရှင် တစ်ဦးကို ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းတွေ အကြောင်း ကိုယ်မှမပြောရင် ဘယ်သူကပြောမှာလဲ?
ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေရဲ့စာရင်းကို အစပျိုး ရာတွင် အခက်အခဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အတွက် အကူအညီရစေရန် ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတချို့ရဲ့စာရင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၄င်းမှ သင်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် အရည်အချင်းတွေကို ရွေးပြီး ရေးချပါ။ စာရင်းထဲ၌မပါသော တခြား အရည်အချင်း တွေကိုလည်း ဖြည့်စွက်ပါ။ သင်ရွေးလိုက်တဲ့အရည် အချင်းတစ်ခုစီကို ထောက်ခံပေးမဲ့ သင့်ဘ၀ထဲက အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ အလုပ်အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း ကြိုတင်စဉ်းစားပြီး ပြင်ဆင်ထားပါ။
အလိုက်သင့် ပြုမူနေထိုင်တတ်သော (adaptable)
ဖိအား/တွန်းအားအောက်၌ အလုပ်လုပ်နိုင်သော (can work under pressure)
ဂရုတစိုက် လုပ်တတ်သော (careful)
ကျွမ်းကျင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သော (competent)
မိမိရဲ့အချိန်နဲ့ အားတွေပုံပေးပြီးအလုပ်ကို လိုလိုလားလားလုပ်တတ်သော (committed)
စိတ်ရောကိုယ်ပါ အလုပ်ထဲ၌ နှစ်မြုပ်ထားသော (dedicated)
အခြေအနေကိုလိုက်၍ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သော (flexible)
တခြားသူများနှင့် အဆင်ပြေပြေနေတတ်သော (get on well with other people)
အဟောအပြောကောင်းသူ (good communitor)
ဟာသဥာဏ်ရှိသော (good sense of humor)
အချိန်တိကျသူ (good timekeeper)
စိတ်သက်သောင့်သက်သာ နေတတ်သော (relaxed)
အခြားသူများနှင့် အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်သော (works well with others)
မှတ်စုများမှ CV အသွင်သို့ပြောင်းခြင်း (Turning your notes intoaCV)
ဒီအချိန်မှာဆိုရင် သင့်လက်ထဲမှာ အချက်အလက်ပြည့်စုံတဲ့ မှတ်စုအကြမ်းတစ်စုံရှိနေလောက်ပါပြီ။ ဘယ်လောက်ပဲကြမ်းကြမ်းပါ။ အသေးစိတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ နောက်တဆင့်ကသင့်CV ကိုဘယ်လိုစီစဉ်ချင်ပါသလဲ?
နှစ်ကာလအပိုင်းအခြားအလိုက် (chronologically) လား?
လက်တွေ့ကျကျ အသုံးဝင် (functionally) အောင်လား?
နှစ်ကာလအလိုက်ပိုင်းခြား စီစဉ်ထားသော CV (Chronological CV)
ဒီအမျိုးအစားမှာဆိုရင် သင် သင်ယူခဲ့ရတဲ့ ပညာအရည်အချင်းတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ တွေကို နှစ်အလိုက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ- စောစောပိုင်းနှစ်တွေကစပြီး ယခုလက်ရှိနှစ်အထိ (သို့) ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့ ယခုလက်ရှိနှစ်တွေကစပြီး စောစောပိုင်းနှစ်တွေဆီပြန်သွားတာဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့ကတော့ လျှောက်လွှာရှင်ရဲ့ လက်တလော အတွေ့အကြုံတွေ ကိုသာ စိတ်ဝင်စားတတ်တာကြောင့်- ဒုတိယနည်းဖြစ်တဲ့ နှစ်တွေကိုနောက်ပြန်ပြန်စီတဲ့ နည်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ ဒီလိုမျိုးနှစ်ကာလအပိုင်းအခြားလိုက် စီစဉ်ထားတဲ့ CV တွေရဲ့အားသားချက်ကတော့ သင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ၎င်းတို့တွင် လုပ်ခဲ့တဲ့ကာလအပိုင်းအခြားတွေကို ထင်သာမြင်သာအောင် ဖော်ပြပေးတဲ့အပြင် သင့်ရဲ့အလုပ် အဆက်မပြတ်မှု (continuity of employment) ကိုပါ ပေါ်လွင်စေပါတယ်။
၎င်းရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ သင့်ရဲ့အလုပ်သက်တမ်းတလျှောက်မှာ အကောင်းအဆိုးတွေရှိနေပါက (အထူးသဖြင့်အလုပ်လက်မဲ့ကာလများ)ထိုအရာတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တည်ငြိမ်ယုံကြည် စိတ်ချ ရတဲ့ဝန်ထမ်းကို ရှာဖွေနေတဲ့အလုပ်ရှင်ဆိုရင်တော့ ဒီCV မျိုးကိုနှစ်သက်မှာ သေချာပါတယ်။
လက်တွေ့ကျကျအသုံးဝင်သော CV (Functional CV)
လက်တွေ့ကျပြီး အသုံးဝင်အောင်စီစဉ်ရေးသားထားတဲ့ CV မှာတော့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ၊ အရည်အချင်းတွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်ဟာ-ကားပစ္စည်း အရောင်း အ၀ယ်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ယောက်ဖြစ်ပြီး ရုံးချုပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးတယ် ဆိုပါစို့။ ထိုလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အောက်ပါတို့ကို ခေါင်းစဉ် အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း (presenting the product range)
၀ယ်ယူသူအပေါ် ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်း (customer care)
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (information technology)
အထက်ပါခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီ၏ အောက်တွင်သင့်အနေဖြင့် တိကျသောအတွေ့အကြုံများကို ထပ်ပြီး အသေး စိတ်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီချဉ်းကပ်နည်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ သင့်မှာအတွေ့ အကြုံမရှိခြင်းနှင့် အလုပ်လက်မဲ့ကာလတွေရဲ့ အကြောင်းတွေကို ရှင်းပြနေစရာမလိုဘဲ သင့်ရဲ့အားသာချက်များကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ဆိုးကျိုးကတော့ လူအများ၏အထင်ကြီးမှုကို ရရှိထားတဲ့ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးဦးထံမှာ သင်အလုပ် လုပ်ခဲ့တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကာလအပိုင်းအခြားတွေကို မြင်သာအောင် မဖော်ပြနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးကျွမ်း ကျင်မှုတွေ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းကို ရှာဖွေနေတဲ့ အလုပ်ရှင် အတွက်ဆိုရင် ဒီ functional CV က chronological CV ထက်ပိုအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
ထိရောကျသော CV (The Successful CV)
အောငျမွငျသော CV တဈစောငျသညျ သခြောစှာ စဉျးစားခွငျးနှငျ့ စီစဉျခွငျးတို့မှ ဖွဈပျေါလာတဲ့ ရလဒျဖွဈပါ တယျ။ အလုပျရှငျတဈဦးဟာ အလုပျအတှကျ သငျ့တျောတဲ့ အတှအေ့ကွုံ စှမျးရညျနှငျ့ ကိုယျပိုငျအရညျအခငျြးမြားရှိတဲ့ အလုပျလြှောကျလှာရှငျကို ရှာဖှနေတောဖွဈပါတယျ။ အလုပျရသှားတဲ့ သူဟာ ဖျောပွခဲ့တဲ့ အခကျြတှအေားလုံးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ အပွငျ ၄ငျးတို့ကို ဆှဲဆောငျမှုအရှိဆုံးသော နညျးနဲ့ တငျပွနိုငျခဲ့လို့ပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုလုပျနိုငျဖို့ဆိုရငျ ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျသသေခြောခြာစဉျးစားကွညျ့ ဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ငါဟာ အရငျက ဘာတှလေုပျခဲ့သလဲ?။ သငျ့တျောတဲ့ အခှငျ့အရေးသာရမယျဆိုရငျ ငါ ဘာတှလေုပျဆောငျနိုငျမလဲ?။ ဆိုတဲ့ အခကျြတှကေိုပဲပေါ့။
CV တဈခုကို ပွငျဆငျရာတှငျ အောကျဖျောပွပါ နယျပယျလေးခုကို ထညျ့သှငျးစဉျးစားပါ။
ဒီလိုလုပျနိုငျဖို့ နညျးအမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။ ရရှိလာမဲ့ ရလာဒျကတော့ တဈခုတညျးသော ဖွဈနိုငျခပြေါ။ ဘယျခဉျြးကပျနညျးကိုပဲသုံးသုံး သငျ့ရဲ့စိတျကူးတှကေို မှတျစုအဖွဈပွောငျးရေးတဲ့အခါမှာ အသေးစိတျဖို့ မမပေ့ါနှငျ့။ သငျ့အနနေဲ့ အလုပျနဲ့မဆီလြျောဘူးလို့ ထငျထားတဲ့ အခကျြတှကေိုတောငျမှ ထညျ့ရေးဖွဈအောငျရေးပါ။
ဒါ့အပွငျ သငျ့ရဲ့ စာရငျးတှေ၊ မှတျစုတှကေို ကိုယျ့အနီးအနားမှာ မွငျသာအောငျ ဖှငျ့ထားပါ။ ၄ငျးတို့ကို မကွာခဏ ပွနျပွနျကွညျ့ရငျးနဲ့ ဘယျအခကျြမှ မမေ့ကနျြခဲ့ဘူးဆို တာကို သခြောအောငျလုပျပါ။ ဒီလိုပွငျဆငျမှုအဆငျ့က ဦးနှောကျကို သသေခြောခြာ စဉျးစားအောငျ လုပျခိုငျးခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ရှေးခယျြခွငျးနဲ့ စီစဉျခွငျးတို့က နောကျကလိုကျလာမှာဖွဈပါတယျ။
လြှောကျလှာရှငျအမြားစုက သူတို့ရဲ့ CV တှကေို အတှအေ့ကွုံနဲ့ စရတာလှယျတယျလို့ ယူဆထား ကွပါတယျ။ ဘာ့ကွောငျလဲဆိုတော့ လကျဆုပျလကျကိုငျပွနိုငျလို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ဘဝကို အဆငျ့ဆငျ့ ပိုငျးခွားပွီး စဉျးစားကွညျ့လိုကျပါ။ ဒီအဆငျ့တှဟော ဘာတှလေဲဆိုတာကတော့ သငျ့အပျေါမှာပဲ မူတညျပါ တယျ။ အဆငျ့တှရေဲ့ ပိုငျးခွားမှုတှကေို အလုပျပွောငျးလဲခွငျး၊ တဈနရောမှ တဈနရောသို့ ရှပွေ့ောငျးခွငျး၊ သငျ့ဘဝရဲ့ အဓိကကတြဲ့ အဖွဈအပကျြမြား (ဥပမာ-အိမျထောငျပွုခွငျး၊ သားသမီးရရှိခွငျး၊ အိမျဝယျခွငျး)နဲ့ ခှဲခွားနိုငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ အတှအေ့ကွုံမှတျစုတှမှောပါဝငျသငျ့တဲ့အကွောငျးအရာတှကေတော-့
ကြှမျးကငျြမှုဆိုငျရာ သငျတနျးမြား (professional training)
အလုပျလုပျခဲ့တဲ့ ကာလမြား (periods of employment) (ဒီထဲမှာ အခြိနျပိုငျးအလုပျတှေ၊ ကွာကွာမခံခဲ့တဲ့အလုပျတှေ၊ မညျမညျရရအလုပျတှေ အားလုံးပါဝငျပါတယျ။)
လုပျဆောငျခကျြတဈမြိုးတညျးအပျေါ အာရုံစိုကျခဲ့ရတဲ့ သငျ့ဘဝမှာ အကြုံးဝငျခဲ့တဲ့ တခွားအခြိနျ ကာလမြား (other extended periods in which your life focused onaparticular activity)
လုပျခဲ့ဖူးသော လုပျအားပေးအလုပျမြား (any volunteer work you have done) တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
အလုပျလြှောကျလှာပွငျဆငျတဲ့အခါမှာ ဘာ့ကွောငျ့ ကိုယျပိုငျဝါသနာတှကေို ထညျ့စဉျးစားရပါ လိမျ့-ဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို သငျ့အနနေဲ့ မေးကောငျးမေးနိုငျပါတယျ။ တကယျတော့ ၀ါသနာဆိုတာ သငျအလုပျ အားတဲ့အခြိနျတှမှော လုပျတဲ့အရာတှပေဲ မဟုတျပါလား? ၀ါသနာတှကေို အောကျဖျေါပွပါအကွောငျးမြားကွောငျ့ အလုပျလြှောကျလှာ ပွငျဆငျတဲ့အခါမှာ ထညျ့သှငျးစဉျးစားရခွငျးဖွဈပါတယျ။ ၀ါသနာတှဟော_
သငျ့ရဲ့ ပငျကိုယျစရိုကျကို ပုံဖျောပွတဲ့ နညျးလမျးတှထေဲက တဈခုပါပဲ။ ဒါ့အပွငျ သငျ့ပငျကိုယျ စရိုကျဆိုတာကလညျး အလုပျလြှောကျလှာအတှကျ အလှနျဆီလြျောလှပါတယျ။
လတျတလော လုပျငနျးခှငျမှာ အသုံးမပွုရတဲ့ ကြှမျးကငျြမှုတှကေိုလညျး ဖျောပွနပေါတယျ။
တဈစုံတဈရာသောအလုပျမြိုးကိုမှ သငျဟာ ဘာ့ကွောငျ့ စိတျဝငျစားနရေတာလဲဆိုတဲ့အခကျြကို လညျး ဆကျစပျပွနပေါတယျ။
အရငျက သငျ မစဉျးစားခဲ့ဖူးသော အလုပျတှကေိုလညျး ညှနျပွနတေတျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ကြှမျးကငျြမှုတှကေို စီတနျးရေးခတြဲ့အခါမှာ အရငျအတှအေ့ကွုံတှကေို စဉျးစားပွီး ထုတျ ထားတဲ့ မှတျစုလေးတှကေ အထောကျအကူပေးမှာဖွဈပါတယျ။ သငျ့ဘဝရဲ့ အစိတျအပိုငျးမြားကို စဉျးစားရငျး ကိုယျ့ကိုယျကို အောကျပါ မေးခှနျးမြားကို မေးကွညျ့ပါ။
ငါ့မှာ ရှိပွီးသား ကြှမျးကငျြမှုတှထေဲက ဘယျတဈခုကို ဒီနရောမှာ အသုံးပွုခဲ့တာလဲ?။
ဘယျကြှမျးကငျြမှုတှကေို တိုးတကျအောငျ (သို့) ခိုငျမာအောငျ ပွုလုပျခဲ့သလဲ?။
ဘယျကြှမျးကငျြမှု အသဈတှကေို သငျယူခဲ့သလဲ?။
ထို့အပွငျ သငျ့ရဲ့ အားလပျခြိနျမှာ လုပျတဲ့ ၀ါသနာတှကေိုလညျး စဉျးစားကွညျ့ပါ။ ဒါတှကေလညျး အလုပျလြှောကျခွငျးနဲ့ ဆီလြျောပွီး အသုံးဝငျတဲ့ ကြှမျးကငျြမှုတှကေို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ကြှမျးကငျြမှုစာရငျးထဲမှာ အသကျမှေးမှုပညာ၊ အလုပျအကိုငျတှနေဲ့ပဲ ဆကျစပျနတေဲ့ ကြှမျးကငျြမှု မြားသာမက မိမိရဲ့ကိုယျပိုငျကြှမျးကငျြမှုမြားကိုပါ ထညျ့ရေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့။
ပှဲမြားစီစဉျခွငျး (organizing events)
၀နျထမျးမြားကို လကေ့ငျြ့ပေးခွငျး (training staff)
အကွံဉာဏျမြားပေးခွငျး (giving advice)
အစညျးအဝေးမြား၌ သဘာပတိအဖွဈ ဆောငျရှကျခွငျး (chairing meetings)
တငျဆကျမှုမြားပွုလုပျနိုငျခွငျး (making presentations)
ပွဿနာမြားဖွရှေငျးပေးခွငျး (trouble - shooting)
လူစုလူဝေးနှငျ့ တှဆေုံ့ခွငျး (meeting the public)
ဒီလို စာရငျးပွုစုနတေဲ့အခါမှာ ကိုယျရေးခလြိုကျတဲ့ ကြှမျးကငျြမှုတှဟော ဆီလြျောမှုရှိရဲ့လားဆိုတာ ကို တှေးပွီး သိပျစိတျပူမနပေါနဲ့။ ရှိသမြှ အကုနျသာခရြေးပါ။
ရေးလို့ပွီးပွီဆိုတော့မှ စာရငျးကို ပွနျစဈကွညျ့ပါ။ ကိုယျရေးထားတဲ့ ကြှမျးကငျြမှုတှဟော သီးခွား ကြှမျးကငျြမှုတဈခုစီလား (သို့)သီးခွားခှဲထုတျပဈသငျ့တဲ့ ကြှမျးကငျြမှုအစုလားဆိုတာကို ဆနျးစဈကွညျ့ပါ မယျ။ ဥပမာ- အောကျတှငျ ဖျောပွထားသော သီးခွားကြှမျးကငျြမှု (၃)ခုအဖွဈ ရေးခဲ့ရမှာကို communicating (ဆကျသှယျရေးကောငျးခွငျး)လို့ပဲရေးခဲ့တာမြိုးပဲပေါ့၊။
နညျးပညာဆိုငျရာ အကွောငျးအရာမြားကို ရှငျးလငျးလှယျကူအောငျပွုလုပျခွငျး (simplifying technical subject matters)
ရှငျးလငျးလှယျကူသော နညျးပညာဆိုငျရာလကျဆှဲစာဆောငျမြားရေးသားခွငျး (writing simple technical manuals)
ကြှမျးကငျြမှု မရှိသေးသော ၀နျထမျးမြားကို လကေ့ငျြ့ပေးခွငျး(training non–specialist workers)
ကိုယျပိုငျအရညျအခငျြးမြား (Personal Qualities)
ဒီနယျပယျကိုတော့ လူမြားကအခကျခဲဆုံးဖွဈတယျလို့ သတျမှတျကွပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ ကိုယျ့အကွောငျးနဲ့၊ ကိုယျရဲ့အရညျအခငျြးတှအေကွောငျးကို မပွောခငျြကွလို့ပါပဲ။။ အကွောငျးကတော့ မိမိကို ဘဝငျမွငျ့သူ၊ ကိုယျ့ကိုယျကို ရှတေ့နျးတငျသူအဖွဈ အထငျခံရမှာ စိုးလို့ပါပဲ။ ဒါ့အပွငျ ခွတေဈလှမျး နောကျဆုတျပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို ဓမ်မဓိဌာနျကကြ ကွညျ့ရမှာ ခကျခဲနလေို့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ တဖကျကကွညျ့တော့လညျး အလားအလာရှိသော အလုပျရှငျ တဈဦးကို ကိုယျ့ရဲ့အရညျအခငျြးတှေ အကွောငျး ကိုယျမှမပွောရငျ ဘယျသူကပွောမှာလဲ?
ကိုယျပိုငျအရညျအခငျြးတှရေဲ့စာရငျးကို အစပြိုး ရာတှငျ အခကျအခဲတှရေ့တတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့အတှကျ အကူအညီရစရေနျ ကိုယျပိုငျအရညျအခငျြးတခြို့ရဲ့စာရငျးကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။ ၄ငျးမှ သငျနဲ့ ကိုကျညီမယျ့ အရညျအခငျြးတှကေို ရှေးပွီး ရေးခပြါ။ စာရငျးထဲ၌မပါသော တခွား အရညျအခငျြး တှကေိုလညျး ဖွညျ့စှကျပါ။ သငျရှေးလိုကျတဲ့အရညျ အခငျြးတဈခုစီကို ထောကျခံပေးမဲ့ သငျ့ဘဝထဲက အဖွဈအပကျြတှနေဲ့ အလုပျအတှအေ့ကွုံတှကေိုလညျး ကွိုတငျစဉျးစားပွီး ပွငျဆငျထားပါ။
အလိုကျသငျ့ ပွုမူနထေိုငျတတျသော (adaptable)
ဖိအား/တှနျးအားအောကျ၌ အလုပျလုပျနိုငျသော (can work under pressure)
ဂရုတစိုကျ လုပျတတျသော (careful)
ကြှမျးကငျြစှာ ဆောငျရှကျနိုငျသော (competent)
မိမိရဲ့အခြိနျနဲ့ အားတှပေုံပေးပွီးအလုပျကို လိုလိုလားလားလုပျတတျသော (committed)
စိတျရောကိုယျပါ အလုပျထဲ၌ နှဈမွုပျထားသော (dedicated)
အခွအေနကေိုလိုကျ၍ ပွောငျးလှယျပွငျလှယျသော (flexible)
တခွားသူမြားနှငျ့ အဆငျပွပွေနေတေတျသော (get on well with other people)
အဟောအပွောကောငျးသူ (good communitor)
ဟာသဉာဏျရှိသော (good sense of humor)
အခြိနျတိကသြူ (good timekeeper)
စိတျသကျသောငျ့သကျသာ နတေတျသော (relaxed)
အခွားသူမြားနှငျ့ အလုပျကောငျးကောငျးလုပျနိုငျသော (works well with others)
မှတျစုမြားမှ CV အသှငျသို့ပွောငျးခွငျး (Turning your notes intoaCV)
ဒီအခြိနျမှာဆိုရငျ သငျ့လကျထဲမှာ အခကျြအလကျပွညျ့စုံတဲ့ မှတျစုအကွမျးတဈစုံရှိနလေောကျပါပွီ။ ဘယျလောကျပဲကွမျးကွမျးပါ။ အသေးစိတျဖို့ပဲ လိုပါတယျ။ နောကျတဆငျ့ကသငျ့CV ကိုဘယျလိုစီစဉျခငျြပါသလဲ?
နှဈကာလအပျိုငျးအခွားအလိုကျ (chronologically) လား?
လကျတှကေ့ကြ အသုံးဝငျ (functionally) အောငျလား?
နှဈကာလအလိုကျပိုငျးခွား စီစဉျထားသော CV (Chronological CV)
ဒီအမြိုးအစားမှာဆိုရငျ သငျ သငျယူခဲ့ရတဲ့ ပညာအရညျအခငျြးတှနေဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံ တှကေို နှဈအလိုကျဖျောပွထားပါတယျ။ အဲဒီအခါမှာ- စောစောပိုငျးနှဈတှကေစပွီး ယခုလကျရှိနှဈအထိ (သို့) ပွောငျးပွနျဖွဈတဲ့ ယခုလကျရှိနှဈတှကေစပွီး စောစောပိုငျးနှဈတှဆေီပွနျသှားတာဆိုပွီး နှဈမြိုးရှိပါတယျ။ အလုပျရှငျတဈဦးအနနေဲ့ကတော့ လြှောကျလှာရှငျရဲ့ လကျတလော အတှအေ့ကွုံတှေ ကိုသာ စိတျဝငျစားတတျတာကွောငျ့- ဒုတိယနညျးဖွဈတဲ့ နှဈတှကေိုနောကျပွနျပွနျစီတဲ့ နညျးကို ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ အသုံးပွုနကွေပါပွီ။ ဒီလိုမြိုးနှဈကာလအပျိုငျးအခွားလိုကျ စီစဉျထားတဲ့ CV တှရေဲ့အားသားခကျြကတော့ သငျအလုပျလုပျခဲ့ဖူးတဲ့ ကုမ်ပဏီတှေ၊ အဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ ၎င်းငျးတို့တှငျ လုပျခဲ့တဲ့ကာလအပိုငျးအခွားတှကေို ထငျသာမွငျသာအောငျ ဖျောပွပေးတဲ့အပွငျ သငျ့ရဲ့အလုပျ အဆကျမပွတျမှု (continuity of employment) ကိုပါ ပျေါလှငျစပေါတယျ။
၎င်းငျးရဲ့ အားနညျးခကျြကတော့ သငျ့ရဲ့အလုပျသကျတမျးတလြှောကျမှာ အကောငျးအဆိုးတှရှေိနပေါက (အထူးသဖွငျ့အလုပျလကျမဲ့ကာလမြား)ထိုအရာတှကေိုထငျထငျရှားရှားဖျောပွနမှောဖွဈပါတယျ။တညျငွိမျယုံကွညျ စိတျခြ ရတဲ့ဝနျထမျးကို ရှာဖှနေတေဲ့အလုပျရှငျဆိုရငျတော့ ဒီCV မြိုးကိုနှဈသကျမှာ သခြောပါတယျ။
လကျတှကေ့ကြအြသုံးဝငျသော CV (Functional CV)
လကျတှကေ့ပြွီး အသုံးဝငျအောငျစီစဉျရေးသားထားတဲ့ CV မှာတော့ ကြှမျးကငျြမှုတှေ၊ အရညျအခငျြးတှကေို စုစညျးတငျပွထားပါတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ သငျဟာ-ကားပစ်စညျး အရောငျး အဝယျကိုယျစားလှယျတဈ ယောကျဖွဈပွီး ရုံးခြုပျမှာ တာဝနျထမျးဆောငျဖူးတယျ ဆိုပါစို့။ ထိုလုပျငနျးနဲ့ ပတျသကျပွီး အောကျပါတို့ကို ခေါငျးစဉျ အနနေဲ့ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
ထုတျကုနျအမြိုးမြိုးနဲ့ မိတျဆကျပေးခွငျး (presenting the product range)
၀ယျယူသူအပျေါ ၀နျဆောငျမှုပေးခွငျး (customer care)
သတငျးအခကျြအလကျနညျးပညာ (information technology)
အထကျပါခေါငျးစဉျတဈခုစီ၏ အောကျတှငျသငျ့အနဖွေငျ့ တိကသြောအတှအေ့ကွုံမြားကို ထပျပွီး အသေး စိတျဖွညျ့စှကျနိုငျပါသေးတယျ။ ဒီခဉျြးကပျနညျးရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးကတော့ သငျ့မှာအတှေ့ အကွုံမရှိခွငျးနှငျ့ အလုပျလကျမဲ့ကာလတှရေဲ့ အကွောငျးတှကေို ရှငျးပွနစေရာမလိုဘဲ သငျ့ရဲ့အားသာခကျြမြားကို ပျေါလှငျစပေါတယျ။ ၎င်းငျးရဲ့ဆိုးကြိုးကတော့ လူအမြား၏အထငျကွီးမှုကို ရရှိထားတဲ့ အလုပျရှငျတဈဦးဦးထံမှာ သငျအလုပျ လုပျခဲ့တဲ့ အရေးကွီးတဲ့ ကာလအပိုငျးအခွားတှကေို မွငျသာအောငျ မဖျောပွနိုငျခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အထူးကြှမျး ကငျြမှုတှေ လုပျနိုငျစှမျးတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ဝနျထမျးကို ရှာဖှနေတေဲ့ အလုပျရှငျ အတှကျဆိုရငျ ဒီ functional CV က chronological CV ထကျပိုအသုံးဝငျပါလိမျ့မယျ။
Permalink Reply by November Aye on September 28, 2013 at 9:21
ီDear Teacher Soe Soe Win
Permalink Reply by sumyatwinn on September 28, 2013 at 12:34
Permalink Reply by venus on September 28, 2013 at 16:47
Permalink Reply by zawzawmyint on September 28, 2013 at 17:13
Permalink Reply by wai phyo on September 28, 2013 at 21:42
I like it. it can help my lifealot. Thank you so much.
Permalink Reply by San Thidar on September 29, 2013 at 10:20
Permalink Reply by Sarthar Nyi on September 29, 2013 at 19:19
အဲဒီ CV ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲဗျာ
Permalink Reply by memeaung on September 30, 2013 at 12:47
Thank alot your successful CV Form.
Permalink Reply by Yu Yu Thaw on September 30, 2013 at 14:56
Thanks, let me know about CV.
Permalink Reply by loon poe eain on October 1, 2013 at 10:10
Permalink Reply by tin nilar win on October 1, 2013 at 14:08
Permalink Reply by Ngreim Hsu Wai on October 2, 2013 at 18:58